Ugudbinta xirmooyinka istiikarada ah ee WhatsApp dhawaan ayey macquul noqon doontaa | Wararka IPhone
Shalay waxaan ku aragnay maqaal sidee ugu dari kartaa istiikarka wadahadalka ee ku jira barnaamijka farriinta caanka ah ee WhatsApp. Maanta waxaan idinla wadaageynaa dhamaantiin war cusub oo ku saabsan barnaamijkaan oo hada kujira qaab beta laakiin dhawaan gaari doona barnaamijka rasmiga ah.
Waxay ku saabsan tahay nala wadaag xirmooyinka istiikarka ah dadka kale, tanna waa inaan ku jirnaa nooca 2.21.120.13 sida ku xusan WABetaInfo. Doorashadan iyo waa la heli karaa dhowaan, xitaa waxaa jira hadal ah in la sii dayn karo maalmaha soo socda, laakiin mararka qaarkood wararka noocan ah ee ka muuqda noocyada beta kuma dhammaadaan in la sii daayo markaa waa inaan aragnaa waxa dhacaya .
Waqtigan xaadirka ah, waxa iska cad ayaa ah in shaqadani ay heli karaan dadka adeegsada nooca beta ee barnaamijka lagu rakibay, taasi waa, tijaabiyayaal beta yar Shaqadan, adeegsadayaashu waxay si toos ah ula wadaagi karaan xirmo istiikar ah oo aan ku haysanno barnaamijka WhatsApp, laakiin xirmada istiikarka ah ee dhinac saddexaad lama wadaagi karo.
Marka aad doorato dadka aad rabto inaad u dirto istiikarada (oo aan xasuusano inay asal ahaan ka soo jeedaan WhatsApp) waxaad si fudud ugu qasbanaan doontaa inaad la wadaagto baakada adoo gujinaya fallaarta saamiga ee ka muuqata dhinaca midig ee kore oo qaataha wuxuu awoodi doonaa inuu soo dejiyo istiikarada iyada oo loo marayo xiriiriye. Runtu waxay tahay in adeegsadayaashu ay adeegsadaan istiikarada badan, Emojis, Gif, iwm, si ay uga jawaabaan farriimaha, ikhtiyaarkani wuxuu xiiso u yeelan karaa in badan oo ka mid ah, haa, aad ayey uga fiicnaan laheyd haddii ay furaan ikhtiyaarkan si ay ugu diraan istiikarrada dhinac saddexaad sidoo kale tan iyo markii loo maleeyo in asalka ah dhammaan isticmaaleyaashu ay yeelan doonaan iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Ugudbinta xirmooyinka istiikarada ah ee WhatsApp dhawaan ayey macquul noqon doontaa
Hadda waxaa suurtagal ah in la tijaabiyo Amazon Luna iyada oo aan lagu martiqaadin